နာမည်​ပျက်စာရင်းဝင် ပေါက်ဖော်ကုမ္ပဏီ CCCC နှင့် ရန်ကုန်မြို့သစ်​ဖော်​​ဆောင်​​ရေး - Maythadin
May Thadin | September 23, 2020 | Knowledge, News | No Comments
ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင် တစ်ဖက်ကမ်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း၏ အဓိက ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီ China Communications Construction Company CCCC ကို အမေရိကန် အစိုးရ က ဩဂုတ် ၂၈ ရက်က
အမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့သည်။တောင်ပေါက်ဖော်ပင်လယ်ရေပိုင်နက်အတွင်း အငြင်းပွားဖွယ် ကျွန်းတည်ဆောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ယင်းသို့ အမည် ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် CCCC ကုမ္ပဏီသည်
ရန်ကုန်မြို့သစ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရပိုင် New Yangon Development Company NYDC နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးလည်းဖြစ်သည်။ယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ပေါက်ဖော်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့
သည့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း၌လည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့သစ်၏ စက် မှုဇုန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ များ တည်ဆောက်ရေး ပေါက်ဖော် CCCC ကုမ္ပဏီ၏ ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင် တင်ဒါ Swiss Challenge တင်သွင်းမှုကို ကြီးကြပ်ရန် ဂျာမနီအ ခြေစိုက် Roland Berger
ကုမ္ပဏီ ကို အကြံပေးအဖြစ်ငှားရမ်း လိုက်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။Roland Berger Pte. Ltd ကို အကြံပေးကုမ္ပဏီအဖြစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံစာချုပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၄ ရက် တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။ ထိုလက်မှတ်ထိုးပွဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက ရန်ကုန်မြို့ အနောက်ဘက် ကမ်းတွင် ခေတ်မီမြို့သစ်ဖော် ဆောင်ရေး ရည်မှန်းချက်အတွက် ခြေလှမ်းသစ်ဟု ပြောကြားသည်။စက်မှုဇုန်နှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများကြောင့်
စက်မှုလုပ်ငန်း များ ပိုမိုချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးကိုဗစ်ကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးအ ပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေရေးနှင့် အလုပ်အ ကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖန် တီးနိုင်မည်ဟု ဝန်ကြီးက ဆို သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် စက်မှု ဇုန်၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများနှင့် အထောက်
အကူပြု အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ ပါဝင်မည်ဖြစ် သည်။ရန်ကုန်မြို့တော် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းသစ်တွင်ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အနက် စက်မှုဇုန်နှင့် အခြေခံအ ဆောက်အအုံများကို ဦးစွာအ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရန် အစိုးရဘက်က စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် ပေါက်ဖော်ကုမ္ပဏီ က ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ Swiss Challenge တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီး ထိုတင်သွင်းသည့် စီမံကိန်းပုံစံကို အခြားကုမ္ပဏီများက ဈေးနှုန်းဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ Swiss Challenge ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက မိမိလုပ်ကိုင်လို
သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုကို အစ၊ အဆုံး အကုန်အကျခံ လေ့လာစစ်တမ်းပြုလုပ် ၍ စီမံကိန်းပုံစံထုတ်ပေးရမည်ဖြစ် သည်။စီမံကိန်းပုံစံထွက်လာပါက အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ဈေးပြိုင်တင်ဒါ ဝင်ပြိုင်ရမည်ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ ၎င်းက တင်ဒါ မအောင်မြင်ပါက တင်ဒါအောင်မြင်သည့်
ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းပုံစံ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် မူလကုမ္ပဏီကို ကုန်ကျစရိတ် ပြန်လည်ပေးအပ်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် CCCC ကုမ္ပဏီ ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမည့်ဟုဆို ထားသော်လည်း အစိုးရဘက်က မူဝါဒပြောင်းလဲလိုက်သဖြင့် စီမံကိန်းကို
အပိုင်းလိုက်သာ အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးရဲမင်းဦး က ပြောကြားထားသည်။ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ယခင် အစိုးရလက်ထက်တွင် စတင်ခဲ့သည့် မြေနေရာရှိ မြေ ဧက ၂၀,၀၀၀ တွင် ပထမအဆင့် စတင်
အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် တည် ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လူဦးရေ သုံးသန်းကျော် နေထိုင် နိုင်မည့်အပြင် အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်း နှစ်သန်းကျော် ဖန်တီးနိုင်ရန်
ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့သစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက စင်ကာပူနိုင်ငံထက် နှစ်ဆကျယ်ဝန်း မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပထမ အဆင့် အဖြစ် ၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ အကွာအဝေးရှိ စက်မှုဇုံနှင့် ရန်ကုန်မြို့သစ်ကြား မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး ဆက်သွယ်မည့်
တံတားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး မြို့သစ်စီမံကိန်းကြောင့် နေအိမ်များ ရွှေ့ပြောင်းခံရသူများအတွက် ၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည့် နေအိမ်အဆောက်အဦ စီမံကိန်းလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။
သို့သော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် CCCC ကုမ္ပဏီနှင့် အပြီးတိုင်လမ်းခွဲဖို့ကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင်များကလည်း ကန့်ကွက်ထားကြသည်။
ရနျကုနျတိုငျး ကွညျ့မွငျတိုငျ တဈဖကျကမျးတှငျ အကောငျအထညျဖျောမညျ့ ရနျကုနျမွို့သဈစီမံကိနျး၏ အဓိက ဦးဆောငျ ကုမ်ပဏီဖွဈသညျ့ ပေါကျဖျောအစိုးရပိုငျ ကုမ်ပဏီ China Communications Construction Company CCCC ကို အမရေိကနျ အစိုးရ က ဩဂုတျ ၂၈ ရကျက
အမညျပကျြစာရငျး သှငျးခဲ့သညျ။တောငျပေါကျဖျောပငျလယျရပေိုငျနကျအတှငျး အငွငျးပှားဖှယျ ကြှနျးတညျဆောကျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ခွငျး ကွောငျ့ ယငျးသို့ အမညျ ပကျြစာရငျးသှငျးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဝါရှငျတနျပို့ဈ သတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့သညျ။ ပေါကျဖျောအစိုးရပိုငျ CCCC ကုမ်ပဏီသညျ
ရနျကုနျမွို့သဈကို ဖျောဆောငျရနျအတှကျ ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရပိုငျ New Yangon Development Company NYDC နှငျ့ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ လကျမှတျရေးထိုးထားပွီးလညျးဖွဈသညျ။ယငျးလကျမှတျရေးထိုးခွငျးကို ပေါကျဖျောသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖငျြ၏ မွနျမာနိုငျငံသို့ လာရောကျခဲ့
သညျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျအတှငျး၌လညျးဖွဈသညျ။ လကျရှိတှငျ ရနျကုနျမွို့သဈ၏ စကျ မှုဇုနျနှငျ့ အခွခေံအဆောကျအအုံ မြား တညျဆောကျရေး ပေါကျဖျော CCCC ကုမ်ပဏီ၏ ဆှဈယှဉျပွိုငျ တငျဒါ Swiss Challenge တငျသှငျးမှုကို ကွီးကွပျရနျ ဂြာမနီအ ခွစေိုကျ Roland Berger
ကုမ်ပဏီ ကို အကွံပေးအဖွဈငှားရမျး လိုကျကွောငျး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေးဝနျ ကွီးဌာနက ထုတျပွနျသညျ။Roland Berger Pte. Ltd ကို အကွံပေးကုမ်ပဏီအဖွဈ လုပျငနျးအပျနှံစာခြုပျ လကျမှတျရေး ထိုးခွငျးကို စကျတငျဘာ ၄ ရကျ တှငျ ကငျြးပခဲ့ခွငျး
ဖွဈသညျ။ ထိုလကျမှတျထိုးပှဲတှငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျ သှယျရေးဝနျကွီး ဦးသောငျးထှနျးက ရနျကုနျမွို့ အနောကျဘကျ ကမျးတှငျ ခတျေမီမွို့သဈဖျော ဆောငျရေး ရညျမှနျးခကျြအတှကျ ခွလှေမျးသဈဟု ပွောကွားသညျ။စကျမှုဇုနျနှငျ့ အခွခေံ အဆောကျအအုံမြားကွောငျ့
စကျမှုလုပျငနျး မြား ပိုမိုခြဲ့ထှငျဆောငျရှကျနိုငျပွီးကိုဗဈကွောငျ့ နိုငျငံစီးပှားရေးအ ပျေါ ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုမြားကို လြော့ပါးစရေေးနှငျ့ အလုပျအ ကိုငျအခှငျ့အလမျးသဈမြား ဖနျ တီးနိုငျမညျဟု ဝနျကွီးက ဆို သညျ။ အဆိုပါ စီမံကိနျးတှငျ စကျမှု ဇုနျ၊ တနျဖိုးနညျးအိမျရာမြားနှငျ့ အထောကျ
အကူပွု အခွခေံအ ဆောကျအအုံမြား ပါဝငျမညျဖွဈ သညျ။ရနျကုနျမွို့တျော မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စီမံကိနျးသဈတှငျပါဝငျသညျ့ လုပျငနျးစီမံကိနျးမြား အနကျ စကျမှုဇုနျနှငျ့ အခွခေံအ ဆောကျအအုံမြားကို ဦးစှာအ ကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျ ရနျ အစိုးရဘကျက စီစဉျခွငျးဖွဈသညျ။
ထို့အတှကျ ပေါကျဖျောကုမ်ပဏီ က ဆှဈယှဉျပွိုငျတငျဒါ Swiss Challenge တငျသှငျးမညျဖွဈပွီး ထိုတငျသှငျးသညျ့ စီမံကိနျးပုံစံကို အခွားကုမ်ပဏီမြားက ဈေးနှုနျးဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျရမညျဖွဈသညျ။ ဆှဈယှဉျပွိုငျတငျဒါ Swiss Challenge ဆိုသညျမှာ ကုမ်ပဏီ တဈခုက မိမိလုပျကိုငျလို
သညျ့ စီမံကိနျးတဈခုကို အစ၊ အဆုံး အကုနျအကခြံ လလေ့ာစဈတမျးပွုလုပျ ၍ စီမံကိနျးပုံစံထုတျပေးရမညျဖွဈ သညျ။စီမံကိနျးပုံစံထှကျလာပါက အခွားကုမ်ပဏီမြားနှငျ့အတူ ဈေးပွိုငျတငျဒါ ဝငျပွိုငျရမညျဖွဈ သညျ။ အကယျ၍ ၎င်းငျးက တငျဒါ မအောငျမွငျပါက တငျဒါအောငျမွငျသညျ့
ကုမ်ပဏီက စီမံကိနျးပုံစံ ထုတျလုပျခဲ့သညျ့ မူလကုမ်ပဏီကို ကုနျကစြရိတျ ပွနျလညျပေးအပျရ မညျဖွဈသညျ။ ရနျကုနျမွို့သဈစီမံကိနျးကို ပေါကျဖျောအစိုးရပိုငျ CCCC ကုမ်ပဏီ ကို လုပျကိုငျခှငျ့ပေးမညျ့ဟုဆို ထားသျောလညျး အစိုးရဘကျက မူဝါဒပွောငျးလဲလိုကျသဖွငျ့ စီမံကိနျးကို
အပိုငျးလိုကျသာ အကောငျအထညျဖျောတော့မညျဟု ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး စီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးရဲမငျးဦး က ပွောကွားထားသညျ။ရနျကုနျမွို့သဈစီမံကိနျးကို ယခငျ အစိုးရလကျထကျတှငျ စတငျခဲ့သညျ့ မွနေရောရှိ မွေ ဧက ၂၀,၀၀၀ တှငျ ပထမအဆငျ့ စတငျ
အကောငျအထညျဖျောမညျဟု ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရအဖှဲ့က ထုတျပွနျထားသညျ။ စီမံကိနျးကို ရနျကုနျမွဈ အနောကျဘကျကမျးတှငျ တညျ ဆောကျမညျဖွဈပွီး အနညျးဆုံး လူဦးရေ သုံးသနျးကြျော နထေိုငျ နိုငျမညျ့အပွငျ အလုပျအကိုငျအ ခှငျ့အလမျး နှဈသနျးကြျော ဖနျတီးနိုငျရနျ
ဖွဈကွောငျး၊ မွို့သဈစီမံကိနျး တညျဆောကျပွီးစီးပါက စငျကာပူနိုငျငံထကျ နှဈဆကယျြဝနျး မညျဖွဈကွောငျး အစိုးရက ထုတျပွနျထားသညျ။ ပထမ အဆငျ့ အဖွဈ ၃ စတုရနျးကီလိုမီတာ အကှာအဝေးရှိ စကျမှုဇုံနှငျ့ ရနျကုနျမွို့သဈကွား မွဈကိုဖွတျပွီး ဆကျသှယျမညျ့
တံတားတညျဆောကျရေး စီမံကိနျးဖွဈပွီး မွို့သဈစီမံကိနျးကွောငျ့ နအေိမျမြား ရှပွေ့ောငျးခံရသူမြားအတှကျ ၉ စတုရနျး ကီလိုမီတာ ကယျြဝနျးသညျ့ နအေိမျအဆောကျအဦ စီမံကိနျးလညျး ပါဝငျမှာဖွဈကာ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၈၀၀ ကုနျကမြညျဟု ခနျ့မှနျးထားကွသညျ။
သို့သျောလညျး ရနျကုနျတိုငျးအစိုးရအနဖွေငျ့ ပေါကျဖျောအစိုးရပိုငျ CCCC ကုမ်ပဏီနှငျ့ အပွီးတိုငျလမျးခှဲဖို့ကို စဉျးစားရနျ လိုအပျပွီး အဆိုပါ ကုမ်ပဏီနှငျ့ လုပျကိုငျခွငျးကို သဘာဝပတျဝနျးကငျြပညာရှငျမြားနှငျ့ မွို့ပွအငျဂငျြနီယာ ပညာရှငျမြားကလညျး ကနျ့ကှကျထားကွသညျ။